Galmudug oo shaacisay waqtiga ay Shabaab ka saareyso degaanadeeda | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Galmudug oo shaacisay waqtiga ay Shabaab ka saareyso degaanadeeda
Maamulka Galmudug ayaa balan qaaday degaanadiisa qeybaha ay kaga harsan yihiin ururka Al-shabaab inuu ka saari doono, kahor Doorashada 2020-ka guud ahaan dalka ka dhaceysa, taasi oo ah qof iyo cod, sidau uu qorshaha yahay.
Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka ayay sheegtay in ay garab ka siinayaan sidii guud ahaan degaanadeeda ay uga saari laheyd xoogaga ururka Al-shabaab oo hada maamula qeybo yar oo ka tirsan Galmudug.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay dhammaan in ay diyaarsan yihiin Ciidamada kala duwan ee maamulka, dhowaana ay xoreyn doonaan degaanadooda, intaasi kadibna ay garab siin doonaan maamulada kale.
Sheekh Shaakir oo u muuqday mid si adag u hadlayay ayaa sheegay 2020-ka in ay rajeynayaan in dalka ay ka dhacdo Doorasho qof iyo cod ah, shacabkana ay doortaan qofka ay raali ka yihiin, si taasi loo gaaro ayuu sheegay in iyaga iyo Shabaab ay dalka ku kala bixi doonaan xilligaasi kahor.
“Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka waxay balan qaadeen in ay garab na siinb doonaan, waxaan rabnaa inaan Galmudug xoreyno waqti kooban, Maamulada Shabaabka dhibka badan uu ku haayana aan gacan siino, cadowgeena aan u midowna, Soomaaliya midnimadeeda aan ku dadaalno.” Ayuu yiri Sheekh Khaakir.
Magaalada Dhuusa-mareeb ayaa shalay waxaa lagu soo gaba gabeeyay shirka Golaha Amniga, kaasi oo ay ka qeyb galeen Golaha Amniga Galmudug, Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka iyo wafdi ka socday UN-ka.